Kukhishwa uNyazi endlini yaseBuhleni - Ilanga News
Home Izindaba Kukhishwa uNyazi endlini yaseBuhleni
Kukhishwa uNyazi endlini yaseBuhleni
UNyazi lunqunyelwe yincwadi izinsuku eziwu-10 ukudedela inkosi entsha ukuba ingene eBuhleni
yiNkosi Mduduzi “Nyazilwezulu” Shembe ethunyelelwe incwadi kuthiwa mayiphume eBuhleni.
KUNUKA omunye umbango wasenkantolo ebandleni lamaNazaretha, njengoba indlu yaseThembezinhle, eholwa yiNkosi Phinda “Kukha-nyakwelanga” Shembe – osekuyiyona indlu yaseBuhleni emuva kokuvunwa yiNkantolo yoMthethosise-kelo mhla ka-22 kuNhlangulana (June) embangweni wesihlalo “sobukhosi” – ithumelele iNkosi Mduduzi “Nyazilwezulu” Shembe incwadi ethi mayiphume iphele eBuhleni.
Emuva kokushona kweNkosi Vimbeni “Thingolwenkosazane” Shembe ngoNdasa (March) 2011, kwasukuma iNkosi yamaQadi, uMqoqi Ngcobo yatshela amaNa-zaretha ukuthi uThingo lwaqoka ‘ngomunwe’ indodana yalo uNyazi ukuba ihole ibandla.
Emuva kweNkosi yamaQadi, kwavela ummeli woThingo, uMnu Zwelabantu Buthelezi, owatshela ibandla ukuthi uThingo lwaqoka ngencwadi yomthetho, iNkosi Vela “Misebeyelanga” Shembe (engasekho), okwadala uqhekeko ebandleni.
IMisebeyelanga yaphuma inxiwa layo, yaqala umuzi waseThe-mbezinhle okwathi uma idlula emhlabeni ngoLwezi (November) ka-2017, izintambo zathathwa ngumfowabo, uKukhanyakwela-nga.
Udaba lwangena eNkantolo eNkulu yaseThekwini, ijaji, uMnu Achmat Jappie lavuna iMisebeye-langa ngo-2016. UNyazi lwalwe-dlulisa udaba lwaya eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu, na-khona lwakhala ngaphansi. Lwaya eNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala eBloemfontein, nakhona lwakhala ngaphansi njengoba lwagcina luhluleka kweyomthethosisekelo.
Abameli bendlu obekungeyaseThembezinhle phambilini, iNkosi Trevor Attorneys, sebebhalele uNyazi bethi maluphume luphele emzini waseBuhleni, ludedele inkosi eyavunywa yinkantolo mhla ka-22 kuNhlangulana, futhi luhlukane nokuzibiza ngenkosi yalo muzi.
ILANGA liyibonile incwadi yabameli efundeka kanje: “Sifuna ubuyisele wonke amaphepha – okubalwa kuwona nezitatimende zasebhange, yizikhiye zezimoto zebandla nakho konke okweba-ndla.
“Uma uhluleka wukwenza lokho zingakapheli izinsuku eziwu-10, udaba sizoluyisa enkantolo ukuthola isixazululo. Sifisa wazi ukuthi uma size safika enkantolo, izindleko zalolu daba sizozifuna kuwena,” kusho incwadi yabameli.
Nabameli boNyazi baphendule ngencwadi, bethi eBuhleni akulona ikomkhulu lebandla, wumuzi kayisemkhulu woNyazi, iNkosi Amos “Nyangayezulu” Shembe.
“INkosi uNyazilwezulu ihlala emzini kayisemkhulu owanikwa indawo yiNkosi yamaQadi engasekho (uMzonjani Ngcobo onguyise weNkosi uMqoqi), ngakho ngeke iphume kubo.
“Umuntu nomuntu okholwayo, unelungelo lokuzikhethela ukuthi ukholwa kuphi futhi uholwa ngubani,” kusho incwadi yabameli boNyazi.
Okhulumela indlu okwakunge-yaseThembezinhle, uMnu Nkululeko Mthethwa, uthe ngamanga aluhlaza ukuthi umuzi waseBuhleni kawulona ikomkhulu lebandla.
“Ngesikhathi iNyangayezulu iphuma eKuphakameni, yaphuma nebandla, ngakho-ke indawo yayi-nikwa ibandla.
“Lokhu ngikusho ngoba siyawazi umuzi weNkosi iNyangayezulu okwathi noma isikhotheme yaqa-liswa kuwona ngaphambi kokuyo-fihlwa eBuhleni.
“INyangayezulu kwathi noma sekushone undlunkulu wayo yangamngcwaba eBuhleni, kodwa wayongcwatshwa eJudea (eShowe) ngoba ihlonipha ukuthi eBuhleni kungcwatshwa amakhosi,” kusho uMnu Mthethwa.
Okhulumela ezoNyazi, uMnu Lizwi Ncwane, uthe iNyangeyezulu yabekwa lapho kwakhiwe khona umuzi waseBuhleni, ngakho-ke umuzi ngowayo.
“Laba badukisa abantu. Yimbude le abasitshela yona, thina kasinazo izimishini, kasiwona amaRoma,” kusho uMnu Ncwane.
Next articleUKHISHWE NGAPHANSI KWEMIGOMO ENZIMA UNGIZWE